Cumbia, omenaala ọdịnala nke Colombia | Njem zuru oke
Obi abụọ adịghị ya na ụda olu a jikọtara ya na Colombia, na ọdịbendị ya na ndị ya, bụ cumbia. E nweghị oriri ma ọ bụ ememe na mba a nke ndị chords anaghị ada ụda ma gbaa egwu na ụda nke Colombia na-azụ cumbia. Ihe ngosi akara ngosi nke mba ya.
A mụrụ ụdị egwu a na egwu egwu na mpaghara Caribbean, mana ọ teghị aka wee bụrụ ewu ewu na mba ahụ dum. Na nke a, anyị ga-agwa gị maka mmalite ya, ọdịnala ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ metụtara obodo cumbia nke Colombia.
1 Mmalite nke cumbia Colombia
2 Colombian cumbia: ngwa
3 Colombian cumbia: uwe ọdịnala
4 Colombian cumbia: agba egwu
Mmalite nke cumbia Colombia
Dị ka ọtụtụ ngosipụta nka na ọdịnala ndị ọzọ n'ụwa, cumbia bụ nsonazụ. Iji chọpụta ebe o sitere, ị ga-aga narị afọ nke XNUMX, n'ụsọ Oké Osimiri Atlantic nke ebe bụ Colombia ugbu a. Ọ bụ n'ebe ahụ na omenala ọcha nke ọdịnala atọ dị nnọọ iche: na Nwaafọ America, na Onye Europe (n'aka na Spanish) na africana, nke ndị ohu e wetara weta ụwa ọhụrụ.
Obodo ọ bụla ma ọ bụ ọdịnala ọdịnala nyere ihe dị iche. Egwú ndị a nwere ike ịdabere na ụda aborigine, ebe isiokwu na egwu nke egwu ndị ahụ nwere mkpọrọgwụ Spanish. N'ikpeazụ, protagonism nke ịkụ akụ na ịgba egwu Africa Ha mechara ihe nchịkọta nke ga-eme ka Colombia na-asụ cumbia.
Ma otu a ka esi mụọ nsonaazụ dị egwu nke ngwakọta ọgaranya na iche iche.
Cumbia bụ ụda egwu ọdịnala kachasị na Colombia
Agbanyeghị, na Ebe obibi sitere na nke okwu cumbia adịghị ka ihe doro anya. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta na-agbachitere na ọ na-abịa site na okwu kpom, nke pụtara "oriri" ma ọ bụ "ụda" n'ọtụtụ asụsụ Africa.
Ihe doro anya bụ nnukwu ihe ịga nke ọma nke nchọpụta ahụ, nke sitere na mgbe ọ nọ na Colombia gbasaa ruo ọtụtụ afọ ọtụtụ mba ndị ọzọ na Central na South America. A na-abụ Cumbia ugbu a ma na-agba egwu n'ebe dị anya dị ka Mexico, Peru, El Salvador, Venezuela, Argentina ma ọ bụ Peru.
Colombian cumbia: ngwa
Ọzọ mkpụrụ obi atọ (Amerian, European and African) nke cumbia gosipụtara n'ụzọ zuru oke na ngwá egwú ejiri ya iji sugharia ya.
O doro anya na ọrụ ndị ndu bụ maka ngwa egwu. N'afọ iri na ụma nke ilu, Ntinye aka nke omenaala Afrika, bu azu azuchara onu. Ha debere isi ụda ma na-enyere aka site na ngwa ọdịnala nke ala dị ka millet cane ma ọ bụ akpa akpa, nke a na-ejighị n'aka na ọ bụ onye Spanish.
Caña de millo, ngwa akuko nke Colombia cumbia
Na cumbia enwere ụdị atọ ilu isi:
El Obi uto, nke na-agbaso ụda olu nke abụ olu ụtọ.
El Na-akpọ Drum, ejiri tọọ ntọala cadence nke egwu ahụ.
La Tambora. Nke a bụ naanị otu n’ime cumbian na-enweghị mmalite Africa. A na-eji aka na-akụ ya, na-ejighị ịgbà, ma na akpụkpọ ahụ ma na igbe osisi.
E nwekwara ụdị atọ akpa akpa:
Nwoke akpa, nke na-ada ka ndabere.
Nwanyi akpa, nke soro egwu ahụ.
Shortpipe obere akpa, eji dị ka ngwa egwu naanị ma nwee nnukwu ọmarịcha na naanị ngwa ọrụ.
Cañamillero bụ onye na-eme ihe ngosi dị mkpa na otu otu ọ bụla dị na Colombia. Ọ bụ ya na-emetụ Jehova aka Millo mkpisi, ifufe ngwá onye ọdịdị bụ reminiscent nke transverse ọjà. Dị ka aha ya na-egosi, a na-eji mkpuru millet eme ya, mana enwere ike iji ọkpụkpụ ma ọ bụ ọbụna achara. Maracas, ube na ngwa ndi ozo ndi ozo zuru ezu.
Colombian cumbia: uwe ọdịnala
Cumbia abụghị egwu egwu, mana ọ bụ ihe ọhụụ. Na akụkụ a bụ ebe ndị ịgba egwu na-etinye aka na uwe ọdịnala ha mara mma. A na-ejikwa akwa eji maka cumbia eme ihe n'egwuregwu ndị ọzọ dị na Colombia.
Nwaanyị. A na-eji rịbọn chọọ ya mma, ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, na bolero iji gosipụta agba nke ọkọlọtọ Colombia (edo edo, ọbara ọbara na -acha anụnụ anụnụ). Ha na-eyi uwe elu nwanyị nwere aka sara mbara ma na-ahapụ ubu ya.
Nwoke ahụ: uwe ha dị mfe karị. Ọ nwere uwe mwụda ọcha na uwe elu yana, iji nye ya mmetụ nke agba, ịchafụ uhie a maara dị ka "ọdụ oke ọkpa." Akụkụ bụ isi nke uwe nwoke bụ ọdịnala okpu vueltiao.
Nkọwa niile na ihe ịchọ mma nke uwe a na-arụ ọrụ dị mkpa na ogbugbu ịgba egwu cumbia.
Colombian cumbia: agba egwu
E nwere ọtụtụ ụdị ịgba egwu na egwu egwu jikọtara na cumbia Colombia. Ndị a na-anọchi anya karịsịa otu mbedo agba. Menmụ nwoke na ụmụ nwanyị banye n'ọgbọ ahụ uzo ozo. Mgbe ahụ ha na-agbakọta ọnụ n'etiti etiti wee na-agba egwu na ibe ha ka ha daa ụda. Na vidio a anyị nwere ihe atụ mara mma nke ịgba egwu a:
N'etiti mpaghara mpaghara ma ọ bụ ụdị dị iche iche isi ihe nke Colombia cumbia gụnyere ihe ndị a:
Omuma cumbia, abughi ukwe. Ngwá ọrụ dị ọcha.
savannah cumbia, nke eji ngwa oru puru iche nke a na-akpo akwukwo lemon. A na-agba ya na ngalaba nke Sucre, Córdoba na Bolívar.
cumbia vallenata, nke udo (ihe kachasị mma nke vallenatos) na-ekere òkè. N'ime ụdị ọrụ a nke Colombian cumbia enwere ọtụtụ iche.
Kumbiamba. A na-agba ya ya n’ụdị agba egwu dị egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Cumbia, ụda ọdịnala nke Colombia
Cumbia, ebe ọ bụ na ịgba egwu Colombia na-ahụkarị, ụmụ nwanyị anọ nwere ike ịgba egwu ma ọ bụ na homble ahụ dị mkpa.
ncha melcon dijo
che que vuena pag na Argentina ha tinyere anyị ka anyị chọpụta banyere cumbia kedu ezigbo pag
Zaghachi nati melcon